PressReader - Ilanga: 2018-02-15 - Usevulelwe elokudlwengula ufata waseRoma
Usevulelwe elokudlwengula ufata waseRoma
Ukugila isisulu lo mkhuba Ubengaqali
Ilanga - 2018-02-15 - Izindaba - PAMELA ZUNGU
UVULELWE icala lokudlwengula uFata webandla lamaRoma aKhatholika elingaphansi koMgungundlovu.
Lo fata esingeke simdalule ngoba akakaveli enkantolo, usolwa ngokudlwengula ephindelela intombazanyana (15), eyilungu laleli bandla - nayo esingeke siyidalule ukuyivikela. Umthombo weLANGA - osondelene nesisulu - uthi le ntombazanyana itshele umndeni wayo ukuthi ufata usenze lo mkhuba ngesikhathi kunesifundo sekhathekisima ngoZibandlela (December) nyakenye.
Utshele leli phephandaba ukuthi uyise wesisulu oyinto enkulu ebandleni, uvutha engabaselwe kwazise usola ufata ngokumthatha kalula ngesenzo sakhe. Uthi umndeni wesisulu kawusalubhadi esontweni ngenxa yalezi zinsolo.
“Wethuke kwaphela nasozwaneni ngesikhathi indodakazi yakhe imtshela ukuthi ufata ubengaqali ukuyidlwengula njengoba eke wayigila lo mkhuba ngowezi-2016. Uvele agcwale izinyembezi emehlweni uma elanda ngalolu daba,” kusho umthombo. Uthi isisulu sitshele uyise ukuthi ufata uthe kumele sithole isoka silale nalo ukuze kungeke kuvele ukuthi nguyena (ufata) osigile lo mkhuba.
“Umthetho kumele wenze okufaneleyo, uvalele lesi sigilamkhuba, sihlale endaweni esiyifanele ngoba kasikufanele ukuba ngumholi,” kusho umthombo.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uLt Colonel Thulani Zwane, uthi likhona icala lokudlwengula owesifazane oneminyaka eli-15 ubudala, livulwe esiteshini samaphoyisa eHowick. Uthi amaphoyisa asaphenya kanti akekho umuntu osaboshiwe.
ISITHOMBE NGABE: THEGUARDIAN
UVULELWE icala lokudlwengula intombazane eneminyaka eli-15 ubudala ufata webandla lamaRoma aKhatholika.